नेपालमा सधैं बेडमा सुत्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनाम कहिले आउने:आर के त्रिपाठी - NRN Khabar
नेपालमा सधैं बेडमा सुत्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनाम कहिले आउने:आर के त्रिपाठी
कोरिया ,अहिले भइरहेको सरकारका अशोभनिय, अलोकप्रिय कार्यहरुले संघीय लोकतान्त्रीक गणराज्य समेत समाप्त भई जटिल परिस्थिती निर्माण हुने संकेत समेत आउन थालेको छ। सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने हर्ताकर्ता नेताहरु सबैलाई थाहा छ न जनता हिजो कसैले उचालेर उचालिएका थिए न भोलि उचालिनेछन । दुई तिहाई निकटको सरकारलाई यसरी सहज रुपमा काम गर्ने अवसर छ । यो सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्न कसैले रोकेको छेकेको छैन ।
सरकार अलमलिएको छ । प्रधानमन्त्री बिगत १ वर्षदेखि बिरामी हुनुहुन्छ। हरेक दिन देशको सम्पूर्ण नागरिकले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेछन्। दुई दिन अघी मात्र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कोरोना संक्रमण बढेपछि केहि दिनको लागि अस्पताल भर्ना भए । अस्पतालमा उनी भर्ना हुने वित्तिकै बेलायतको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने नदिने भन्ने बारेमा संसदमा र आफ्नै पार्टी भित्र छलफल चलाइएको छ । केबल अस्पताल भर्ना भएको एक दिनमा । तर हाम्रो देशको नियती भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यले गर्दा सरकार संचालन र यसको प्रभावकारीतामा असर परेको कुरा गर्न नपाईने यो कस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो? यो सरकार पूर्णरुपमा असफल त भइसकेको कुरामा विवाद छैन । सरकारकै पारा यस्तै रहने हो भने गणतन्त्रमाथि ठूलो प्रश्न खडा हुनेछ। हरेक क्षेत्रमा सरकार निकम्मा देखियो । रोजगार घटेको छ, भ्रष्टाचार बदेको छ। आर्थिक सूचक नकारात्मक छ। व्यापार घाटा पनि बढेर गएको छ । जनता निराश छन् ।
गरिबहरु मरिरहेका छन्। नेताहरु मोटाइरहेका छन्। धर्म र संस्कृति बेचिन थालेको छ । नैतिक मूल्य र मान्यताहरुमा धमिरा लागेको छ । अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध पनि निकै निराशाजनक छ। माथिका तथ्यहरुले सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको स्पष्ट छ। अनि यो बेलामा नेपाललाई यि सबै कुराबाट उद्धार गर्न सक्ने स्वस्थ, बलियो, १८ घण्टा खट्न सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। विरामी प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको माग गर्नुपर्ने हो। तर के हामी यो सबै गर्न सक्छौ। के स्वयं नेकपाका क्रान्तिकारी कमरेडहरु यो आँट गर्न सक्छन्? देश अघी बढ्ने नबढ्ने यस्तै आँटमा भर पर्छ। हेरौ कतिको आँट गर्छन नेकपाका नेता कार्यकर्ताले। कम्तिमा एक विरामी हजुरबा समानका प्रधानमन्त्रीलाई आराम दिलाउन त आँट गरौं। होइन भने देशले पनि विरामीबाट तङग्रीन धेरै नै समय लाग्छ। सबै यहि कुरेर बसौं।
(राज कुमार त्रिपाठी एनआरएन आई सी सी मानार्थ सदस्य हुन)
धनी राष्ट्र हुन् वा गरिब सबैलाई समान बनायो कोरोना भाइरसले -निर्वतमान अध्यक्ष भट्ट
नेपाली जनसम्पर्क समिती स्पेनले महामानव बिपी स्मृतीमा एक अन्तरकृया कार्यक्रम भब्य रुपमा सम्पन्न